Samachar Batika || News from Nepal » र’जस्वला भएकाे महिलालाई किन अपवित्र मानिन्छ ? धार्मिक र वैजानिक पक्ष जान्नुहोस
र’जस्वला भएकाे महिलालाई किन अपवित्र मानिन्छ ? धार्मिक र वैजानिक पक्ष जान्नुहोस
ईषत्कृष्ण विदग्धं च वायुर्योनिमुखं नयेत ।।
अर्थात स्त्री को शरीरमा जुन वि’कार योग्य पदार्थ एक महिना सम्म जम्मा हुन्छ, देख्नमा कालो रगं हुने र धमनिद्धारा स्त्री को यो’निको मुख बाट बाहिर निस्कन्छ यसैलाई र’जस्वला वा रजोर्शन भनिन्छ ।
यसै श्लोकलाई आधार मानेर विचार गर्दा हामी के निकर्ष निकाल्न सक्छौ भने, महिलाको शरिरबाट निष्कने उक्त पदार्थ ग’न्धयुक्त, कालो रंगको र कि’टाणुमय हुन्छ । जसलाई शरिरको बि’कार पदार्थको रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यसरी निस्कने पदार्थ दु’र्गन्धित र कि’टाणुयुक्त हुने भएकैले महिलाई रजस्वलाको समयमा नछुनु भनेको हो । नेपाली समाजमा महिलाहरु नछुने हुने भन्ने शब्द बढि प्रचलित छ । विशेष गरी ब्राम्हण, क्षेत्री समाजमा महिलालाई सो अवधिमा भान्छाको कार्य गर्न र पुजा, दान धर्म आदि कार्य गर्न पनि वर्जित गरिन्छ । यसमा अत्यन्त सुन्दर वैज्ञानिक, धार्मिक र आधात्मीक पक्षहरु रहेका छन् ।
स्वास्थका दृष्ट्रिले हेर्ने हो भने महिला रजस्वला भएको अवस्था अन्य सामान्य परिस्थितीको भन्दा धेरै शारिरिक कमजोरीहरु भईरहेको हुन्छ । अधिकाशं महिलाको साझा स’मस्या भनेको महिनावरीको समयमा पेट दु’ख्ने, कमजोरी अनुभुती हुने र टाउको दुख्ने लगायतका समस्याहरु देखा पर्छन । यो सामान्य नै हो, किनकी हरेक महिना महिलाहरु एक पटक रजस्वला हुन्छन र यस्तो क्रम चलिरहन्छ नै । वास्तवमा र’जस्वला एक शारिरिक विकासको प्रकृया संग जोडिएको हुन्छ । महिलाको शरिरबाट नचाहिने बिकार, हानिकारक पदार्थको निष्काशन भई शरिर शुद्ध हुने समय पनि हो ।
सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा के पनि हो भने कुनै पनि महिलाको रजस्वला नियमित हुन्छ भने उनि स्वस्थ छिन र सन्तान उत्पादनका लागी योग्य छिन भन्ने बुझिन्छ । केवल रजस्वला हुने महिला मात्र सृष्टिका लागी योग्य हुन्छन । तसर्थ कुनै पनि महिलाको रज’स्वला ठिक छ, भने उनि स्वस्थ छिन भन्ने कुरामा कुनै शंका रहदैन ।
महिलाको शरिरबाट निष्कने वि’कारजन्य पदार्थ हरु अन्य व्यक्तिहरुमा सं’सर्ग नहोस भन्नाका कारण नै रजस्वला भएको महिलाहरुलाई नछुनु भनेको हो । किनकी उक्त समयमा महिलालाई विटुलो अर्थात अप’वित्र भएको अवस्था हो ।
यदि महिलाको शरिरबाट निष्केका त्यस्ता वि’कारजन्य पदार्थ खानामा, कुनै वस्तुमा वा अन्य व्यक्तिको शरिरमा नजानिदो किसिमले स्प’र्श गर्दछ भने अवश्य पनि त्यो हा’निकारक पदार्थ पनि स’म्पर्कमा आएको जस्तो हो । जसको सिधा असर सं’संर्ग आउने व्यक्ति वा वस्तुमा पर्नेछ । महिलाले नुहाएर पनि शुद्ध हुन सक्छन, तर धेरै महिलाहरुमा पटक पटक र’क्त स्रा’व भइरहेको हुन्छ, त्यसैले रज’श्वला अवधीभर यसको धर्म पालना गर्नु नै पर्दछ ।
नेपाली जनमानसमा के विश्वास गरिन्छ भने, र’जस्वला भएको महिलाले पुरुषलाई मात्र होइन, फल प्रदान गर्ने बोट विरुवा वा फुलका विरुवा हरुलाई पनि छुन हुँदैन भन्ने छ । धेरै अध्ययन बाट यो कुरा प्रमाणित भइसकेको छ कि कुनै फल प्रदान गर्ने विरुवालाई र’जस्वला भएको महिलाले छोएमा उक्त बिरुवा सुक्नेछ, वा फलको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष अस’र पर्ने छ ।
महिलाको र’जस्वला धर्मको विषयमा वहस गर्दै गर्दा महिलाहरुलाई उक्त समयमा दान धर्म र मन्दिर तिर्थ जानबाट पनि वञ्चित गरिन्छ । वास्तवमा यसमा अत्यन्त सुन्दर वैज्ञानिक पक्ष हरु छन । स्वास्थ्यको दृष्ट्रिले महिलाहरु कमजोर भएका हुन्छन, जसले गर्दा धेरै हिडने डुल्ने कार्य गर्न समेत गार्हो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मन्दिर र तिर्थ जानु स्वास्थ्यको दृष्ट्रिले राम्रो देखिदैन । यसै सम्बन्धमा, छुटाउनै नहुने कुरा के भने र’जस्वलाको समयमा महिलाहरु धेरै का’मुक हुने गर्छन । यथार्त यो हो कि का’मुकता र धर्म र अधात्म अत्यन्त फरक विषयहरु हुन ।
त्यसैले महिलाहरु रजस्वलाको समयमा मन्दिर यात्रा वा कुनै प्रकारको तिर्थ धर्म नगरेकै राम्रो हो । वैदिक हिन्दु समाजमा मन्दिरलाई ब्रम्हाण्डिय उर्जा संञ्चय केन्द्रको रुपमा पनि लिइन्छ, यसै कारण हुन पनि सक्छ महिलारुलाई मन्दिर जान दिइदैन । किनकी मन्दिर वा तिर्थबाट प्राप्त गर्न सकिने उर्जाहरु शारिरिक रुपले कमजोर भएका महिलाहरुले उर्जा ग्रहण गर्न सक्दैनन, वा भनौ त्यो शक्तिलाई सहन सक्दैनन ।
हाम्रा कुनै पनि धार्मिक तथा प्राचिन सामाजिक प्रचलनहरु बे’काम छैनन । सबैमा उच्चतम वैज्ञानिक आधारहरु रहेका छन । हाम्रा महान पिता पुर्खा हरुको लामो परिक्षण प्रयोग र अनुसन्धानबाट ति कुरा हरु हामिले बिरासतमा पाएका छौ । त्यसैते त्यस्ता परम्पराहरुको यथोचित संरक्षण साथै कुनै परिवर्तन विना अवलम्वन गर्दै जानु पर्छ । हामिले आउने नयाँ पिढिका लागि हस्तान्तरण गर्नु पर्छ ।
आज विश्वनै हाम्रो कुराहरु अवलम्वन गर्न खोज्दैछन, बल्ल उनिहरुले योग ध्यानको महत्व बुझेका छन, अब अर्को केहि दशक लाग्ला उनिहरुलाई र’जस्वला धर्मको पालनाका बारेमा बुझ्न, तेतिबेला हामिलाई कथित आधुनिक संस्कारले खत्तम गरिसकेको त हुने छैन ? एजेन्सी
प्रकाशित मिति ११ माघ २०७६, शनिबार ०८:४१